I-smartphone kunye nethebhulethi enezikrini ezimbini zezinye zezinto ezintsha zoluhlu olutsha lweMicrosoft Surface | Iindaba zeGajethi
I-smartphone kunye nethebhulethi enezikrini ezimbini zezinye zezinto ezintsha zoluhlu olutsha lweMicrosoft
Njengoko bekucwangcisiwe, abafana baseRedmond bangenise ngokusesikweni uhlaziyo olulindelweyo lweSurface, kodwa hayi ngokukodwa, kuba abafana bakaSatya Nadella nabo bebonisile. iimveliso ezintsha kunye nezixhobo ebezingalindelwanga kuba akukho marhe ayepapashiwe malunga nayo.
Sithetha ngayo Umphezulu weDuo, I-smartphone enezikrini ezimbini kunye nokusonga, Umphezulu weNeoIthebhulethi esongelayo enezikrini ezimbini kunye nefayile ye- Indlebe engaphezulu, iseti yentloko engenazingcingo nolawulo lokuchukumisa. Ukuba ufuna ukwazi zonke iindaba eziboniswe ngabafana baseMicrosoft, ndiyakumema ukuba uqhubeke ufunda eli nqaku.
1 Umphezulu weDuo
2 Umphezulu weNeo
3 Indlebe engaphezulu
4 Umphezulu Pro X
6 3 Laptop Surface
Emva kokushiya icandelo le-smartphone awayelithengile kwaNokia, isigqibo sobuqu se-CEO ye-Microsoft yangaphambili, uSteve Ballmer, uStaya Nadella, umphathi we-CEO ngoku uthathe isigqibo sokugxila kwimizamo yakhe kwezinye iindawoukushiya nayiphi na iprojekthi enxulumene nee-smartphones ezisekwe kwiWindows, into endiyithathela ingqalelo njengehlazo njengoko ukudityaniswa okunokukubonelela kuya kuba yinto entle.
I-Surface Duo ukubheja kweMicrosoft kwifowuni kodwa nge-Android. Akukho nto ivela kwiWindows, ubuncinci okomzuzwana, nangona inokwenzeka xa kusenziwa uguqulelo lweeprosesa ze-ARM (kodwa asizukufumana ngxaki yanaphakade yezicelo). I-Surface Duo ngokwenene injalo Izikrini ezimbini ezisongelayo ngaphakathi nangaphandle kwaye azinanto yakwenza neFold Samsung.
Izikrini ezimbini eziyinxalenye yesi sixhobo zii-intshi ze-5,6 kwaye zisinika ubungakanani boxande (abanazisi malunga nenqanaba lezikrini). Zombini izikrini zidityaniswe yinkqubo yehenjisi ethi vumela ukujikeleza ukuya kuthi ga kwiidigri ezingama-360, ke sinokubabeka nakwesiphi na isikhundla.
Ukulawulwa yi-Android 9 kwaye sisebenze ngokubambisana noGoogle kule projekthi, asiyi kuba nangxaki malunga nezicelo, kungekuphela ngenxa yokufumaneka kwazo, kodwa nangenxa yokuhambelana. Ngaphakathi sifumana i-Snapdragon 855 isizukulwana sesibini.
Okwangoku ayaziwa ixabiso eliza kuba nalo i-Surface Duo xa ifika kwintengiso IKrisimesi ka-2020.
Ukongeza kwi-Surface Duo, i-smartphone enezikrini ezimbini, abafana baseMicrosoft nabo babonisile ithebhulethi enezikrini ezimbini. Ngokwenyani ayisiyonto intsha, kuba kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, uToshiba ubonise imodeli efanayo, imodeli engakhange ikwazi ukugubungela imithombo yeendaba ukuba isixhobo esisungulwe yingxilimbela yekhompyuter sinokuba nayo.
Umphezulu weNeo awuyonto engaphaya koko uguquko, ngokobungakanani, beSurface Duo. Umphezulu weNeo usinika isixhobo esinezikrini ezimbini ezisongelayo ezinenkqubo yehenjisi esivumela ukuba sibeke isixhobo nakweyiphi na indawo. Ngokungafaniyo ne-Surface Duo, le thebhulethi ilawulwa yiWindows, ngakumbi ngeWindows 10X.
Njengoko sinokubona kwividiyo engentla, indibaniselwano esifumana kuyo Windows 10X kule modeli ilungile, yongeza inani elikhulu lamathuba kunye ukubonelela ngesisombululo kwiingxaki eziqhelekileyo esinokuzifumana mihla le nakweyiphi na ithebhulethi, kubandakanya i-iPad, esinokuyifumana kwintengiso.
Xa uvula i-Outlook kwiscreen esinye ukuba babeka ii-imeyile kwaye kwelinye sinokufunda kakuhle isicatshulwa ngasinye, ukunika umzekelo wokuziqhelanisa nesinika kona, ukuhambisa izinto ukusuka kwiscreen esinye ukuya kwenye yemisebenzi esisinika yona. Ikwahambelana nosiba, njengoluhlu oluphezulu, ngenxa yoko asizukuphulukana nokuguquguquka esikunikwa sesi sixhobo kule modeli intsha.
Xa usebenzisa ikhibhodi ebonakalayo (sinokusebenzisa eyenyani ebekwe kwiscreen) iWonderbar iyenziwa isebenze, indawo ebekwe ngaphezulu kwebhodi yezitshixo apho sinakho khona ukufikelela kwimifanekiso, iividiyo, ii-emoticons ezinokuzibandakanya kwimiyalezo yethu kunye nokusebenza okufanayo kakhulu kuleyo ifunyenwe kwiMacBook TouchBar, kodwa inkulu kakhulu kwaye iyaguquguquka ngakumbi.
Njengakwi-Surface Duo, ixabiso alibhengezwanga. Uya kuqala hit kwimarike ngeKrisimesi 2020.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikubonise zonke iindaba ezithi zivezwe ngurhwebo olukhulu lwe-elektroniki, iAmazon kulo nyaka nalapho sinokufumana khona EchoBuds, iseti yentloko engenazingcingo nge Iimpawu ezinomdla kakhulu ngexabiso elinomtsalane.
IMicrosoft ikwazise ukuzibophelela kwayo kwii-headphone ezingenazingcingo ezandleni ze-Surface EarBuds. Ukuba sikhangela iseti yentloko engenazingcingo engatsali ingqalelo, ayisiyiyo le uyifunayo, kuba zisinika uyilo olwahluke ngokupheleleyo esinokuyifumana ngoku kwintengiso kunye nomphezulu ongaphandle obanzi kwaye sinokuthi senze izijekulo ukulawula ii-headphone.
Isizathu salo mhlaba kukuba iMicrosoft ifuna ukuba singayisebenzisi ukumamela umculo kuphela, kodwa ikwenzela lawula ukudlala kwakhona kwesilayidi ngePowerpoint. Ukongeza, idibanisa umguquleli ngexesha lokwenyani. Ngezi mpawu, kucacile ukuba intengiso yeshishini iyaqhubeka nokuba yeyona nto iphambili ekujoliswe kuyo nguMicrosoft, nangona kungenjalo kuphela.
I-Surface EarBuds iya kufika kwimarike ngaphambi kokuphela konyaka IRandi ye249 eUnited States. Okwangoku, asazi ukuba izakufumaneka nini kumazwe amaninzi.
Umphezulu Pro X
Kwaye siyaqhubeka ngezixhobo ezitsha eziba yinxalenye yoluhlu lweMicrosoft. ISurface Pro X sisixhobo esinefayile ye- Iscreen se-13-intshi, ziimilimitha ezi-5,3 nje ubukhulu kwaye inobunzima obuyi-774 gram. Sisixhobo sokuqala seMicrosoft esilawulwa yiprosesa ye-ARM, ngakumbi yiMicrosoft SQ1, iprosesa esekwe kwitekhnoloji yeQualcomm esinokuyifumana kwiSpapdragon.
Ukubandakanya iprosesa ye-ARM inefuthe ngqo ekusetyenzisweni kwebhetri, kuba oku kunyuke kakhulu xa kuthelekiswa neeprosesa ezilawulwa ziiprosesa ze-Intel. I-Surface Pro X iya kufumaneka kwiinguqulelo ze-8 kunye ne-16 GB ye-RAM, 128/256 kunye ne-512 yokugcina kwe-SSD kwaye iya kuba nexabiso lokuqala le- $ 999. Okwangoku, iya kufumaneka eMelika kuphela ukusuka nge-5 kaNovemba.
Emva kokubonisa ezona ndaba zibalulekileyo kumnyhadala wenkcazo yoluhlu olungaphezulu, ngoku lixesha lokuba uthethe malunga nokulungiswa okudala kulindelwe uluhlu lweemveliso eziye zenziwa ngabafana baseRedmond ixesha elide kwimarike. Eyona nto intsha inqaku leSurface Pro 7 yile Izibuko le-USB-C.
Ewe, kuyamangalisa kwaye kuyaphikisana njengoko kubonakala ngathi, uluhlu lweSurface Pro aluzange lubonelele ngoqhagamshelo lwe-USB-C, izibuko elingasivumeli ukuba sihlawulise isixhobo kuphela, kodwa likwasivumela ukuba silisebenzise njengezibuko lokumamela kunye nevidiyo , ukufikelela kwiinkqubo zokugcina… ukwaziswa kwezibuko le-USB-C oko akuthethi ukuba i-USB-A port yemveli ilahlekile.
Ukongeza kwizibuko le-USB-C, sikwafumana izibuko le-USB-A, a Indawo encinci ye-MicroSD, inethiwekhi yeDisplayPort, izibuko Umdibaniso womphezulu ukuqhagamshela ikhibhodi zeMicrosoft (ezithengiswa zodwa), Intloko ye-3,5mm yentloko. Ngokumalunga nokunxibelelana ngaphandle kwamacingo, sifumana I-Bluetooth 5 kunye ne-Wi-Fi 6.
Ubunzima beseti, ngaphandle kwebhodibhodi, zii-770 gram kwaye zinemilinganiselo ye-29x20x0.84 cm. Ibhetri ifikelela Iiyure ezingama-10,5 zokuzimela kwaye ixhasa ukutshaja ngokukhawuleza. Ngokwezokhuseleko, sifumana inkqubo yokwazisa yobuso yeWindows kunye neDolby Audio kwicandelo lesandi.
Ixabiso lemodeli ebiza kancinane Inxalenye yee-euro ezingama-749 ezineprosesa yeCore i3, i-4 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina. Zonke iiprosesa esiza kuzifumana ngaphakathi kweSurface Pro 7 uluhlu lwesizukulwana seshumi, esibizwa ngokuba yiLake Lake. Isizukulwana sesixhenxe seSurface Pro 7 siyakufika kwintengiso ngo-Okthobha 22.
3 Laptop Surface
Njengoko bekulindelwe, iMicrosoft ikwabonise isizukulwana sesithathu seLaptop yomphezulu, uluhlu olubonakala ngokufaka ikhibhodi ngokwendalo hayi ngokhetho njengoko kusenzeka kuluhlu olungaphezulu kweefani. Eyona nto intsha inoveli ifumaneka kwi- ukudityaniswa kwezibuko le-USB-C, kuba sonke isixhobo sisebenza ngokufanayo.
Ngaphakathi, sifumana i-XNUMXth isizukulwane se-Intel Ice Lake processors. Imodeli elawulwa yi-AMD Ryzen ikwazisiwe nakwabo bafuna olona hlobo luphezulu lwegraphic kwiLaptop. Le modeli isusile ilaphu le-alcantara ebelibetha kakhulu kwinkcazo yonyaka ophelileyo, kodwa ebelusizi kubasebenzisi, ke esi sizukulwana sitsha kuphela yenziwe ngealuminium.
Uluhlu lweLaptop 3 entsha iya kufumaneka ukusukela nge-22 ka-Okthobha, okwangoku kuphela eUnited States.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-smartphone kunye nethebhulethi enezikrini ezimbini zezinye zezinto ezintsha zoluhlu olutsha lweMicrosoft
Le yiGoPro Hero 8 emnyama, izixhobo zayo kunye noMax